Lithini IBhayibheli Ngezithombe Zobulili Ezingcolile? Ingabe Ucansi Olukuyi-Internet Alulungile? | Imibuzo yeBhayibheli
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Assam Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Osset Isi-Ukraine IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFaroe IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHausa IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikamba IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKiribati IsiKorea IsiKyangonde IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMalta IsiMapudungun IsiMoore IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiNzema IsiPangasinan IsiPapiamento (Sase-Aruba) IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Lithini IBhayibheli Ngezithombe Zobulili Ezingcolile? Ingabe Ucansi Olukuyi-Internet Alulungile?
IBhayibheli alikhulumi ngokuqondile ngezithombe zobulili ezingcolile, ucansi olukuyi-Internet (i-cybersex) noma eminye imikhuba efana nale. Noma kunjalo, iBhayibheli licacile endleleni uNkulunkulu azizwa ngayo ngezenzo ezikhuthaza ucansi ngaphandle komshado noma umbono osontekile ngocansi. Hlola la mavesi eBhayibheli:
“Ngakho-ke, bulalani amalungu emizimba yenu asemhlabeni ngokuqondene nobufebe, ukungcola, isifiso sobulili.” (Kolose 3:5) Ukubukela izithombe zobulili ezingcolile kuvusa izifiso ezingalungile kunokuba kuzibulale. Kwenza umuntu abe ongahlanzekile noma ngongcolile emehlweni kaNkulunkulu.
“Wonke umuntu oqhubeka ebuka owesifazane aze amkhanuke, usephingile naye kakade enhliziyweni yakhe.” (Mathewu 5: 28) Izithombe zokuziphatha okungcolile ngokocansi zivusa imicabango engalungile eholela ezenzweni ezingalungile.
“Ubufebe nokungcola kwazo zonke izinhlobo noma ukuhaha makungaphathwa nakuphathwa phakathi kwenu.” (Efesu 5:3) Akufanele sizijabulise ngisho nangokukhuluma ngokuziphatha okungcolile ngokocansi, ingasaphathwa eyokukubukela noma ukufunda ngakho.
“Imisebenzi yenyama iyabonakala, futhi iwubufebe, ukungcola, . . . nezinto ezifana nalezi. Nginixwayisa kusengaphambili ngokuqondene nalezi zinto, njengoba nje nganixwayisa kusengaphambili, ukuthi labo abenza izinto ezinjalo ngeke balizuze ifa lombuso kaNkulunkulu.” (Galathiya 5: 19-21) UNkulunkulu ubheka labo abasebenzisa izithombe zobulili ezingcolile noma abahlanganyela ocansini olukuyi-Internet, nabaxoxa ngocansi ocingweni, noma abathumelelana izithombe zocansi ngomakhalekhukhwini njengabangcolile ngokuziphatha. Uma sihlanganyela emikhutsheni enjalo, singase silahlekelwe umusa kaNkulunkulu ngokuphelele.
Izithombe zobulili ezingcolile: Ama-video avusa inkanuko, izithombe, noma imibhalo ehloselwe ukuvusa izinkanuko zocansi.
Ucansi olukuyi-Internet: Imiyalezo noma izingxoxo ezenzelwe ukuvusa izifiso zocansi okwenziwa nge-Internet.
Ukuxoxa ngocansi ocingweni: Ukusebenzisa ucingo ukuze ube nezingxoxo ezingafanele zocansi noma ukulalela imiyalezo engcolile ekhuluma ngocansi ingcaca evusa inkanuko.
Ukuthumelelana izithombe zocansi ngomakhalekhukhwini: Ukuthumelelana izithombe ezibonisa ucansi ingcaca noma imiyalezo engcolile ngomakhalekhukhwini.
Izithombe Zobulili Ezingcolile—Ziyingozi Noma Cha?
Izithombe zobulili ezingcolile zibathinta kanjani abantu nemindeni?
Ingabe uphoqelelwa ukuba uthumele izithombe zobulili? Iyini imiphumela yokuthumelelana izithombe zobulili? Ingabe kumane kuwukudlala ngothando okungenabo ubungozi?